चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि पर्यटनको विकास अझ बढ्छः पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे - Bidur Khabar
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि पर्यटनको विकास अझ बढ्छः पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे
विदुर खबर २०७६ असोज २० गते १२:१२
नुवाकोट । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध, विआरआई र यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ सम्बन्धमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग राससकर्मी सञ्चिता घिमिरे र शरद शर्माले लिनुभएको अन्तवार्ताः
२. नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट किन पर्याप्त फाइदा लिन सकिरहेको छैन ?
३. एक क्षेत्र एक मार्ग ९बिआरआई० परियोजनाबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के के हुनसक्छन् ?
४.एक क्षेत्र एक मार्ग (बिआरआई) का लागि हाम्रो तयारी कस्तो पाउनु भएको छ ?
५.चीनमा भएजस्तो विकासलाई नेपालले किन पछ्याउन नसकेको हो ?
६.चीनसँग रेल, सुरुङ, सडकको स्तरोन्नति, ट्रान्समिशनलाइन, नाका खुलाउनेबाहेक अरू कुन कुन सम्झौता÷परियोजनामा सहकार्य गर्न सकिन्छ ?
– संसारमा नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थाको अर्को मुलुक छैन । संसारमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी हाम्रो नेपालमा पाइन्छ । काठ, जडीबुटी, फलफूल, खाद्यान्न खेती सबै यहाँ हुन्छ । यी क्षेत्रका बारेमा हामीले कहीँकतै कहिल्यै पनि अनुसन्धान गरेनौँ । यी कुरामा हामी चीनसँग अनुसन्धानमा सहभागी हुन सक्दछाँै । उहाँहरुलाई हामीले सहभागी गराएर कृषि, उत्पादनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र त्यही अनुसार उत्पादन बढाउनका लागि चिनियाँ सहयोग लिन सक्दछौँ ।
अर्को हाम्रो कृषि स्रोत–साधनमा आधारित भएका उद्योग–कलकारखानामा सहयोग लिन सक्दछौँ । त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्री चीन र अरू मुलुकमा निर्यात गर्न सक्दछौँ । ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामीले सहयोग लिएर विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यो ऊर्जा बेच्न सक्दछौँ । यी क्षेत्रमा हामीले सहयोग लिन सक्दछौँ । चीनमा हामी चिकित्सक, इन्जिनीयरिङ पढ्न पठाउँछाँै । तर ती विषय पढे पनि अनुसन्धानमूलक भएनन् । त्यहाँ अनुसन्धानात्मक पढाइ गरेर त्यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रविधि, सामाजिक परिवर्तनका बारेमा पनि चीनबाट सहयोग लिन सकिन्छ ।
चीनले जनतालाई एक ढङ्गले सिकाएर राष्ट्रप्रति बफादार नागरिक उत्पादन गरेको छ । त्यो पनि हामीले सिक्न सक्दछौँ । राष्ट्रलाई सुदृढ गर्नका लागि जनताको चिन्तन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ त्यो पनि हामीले चीनबाट सिक्न सक्दछौँ ।
७.तपाइ मन्त्री भएका बेला नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध बढाउन के के काम भएका थिए ?
८.अहिले चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले के अपेक्षा राख्न सक्छ ?
– जहाँ जहाँ चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ त्यो–त्यो ठाउँमा पर्यटनको विकास राम्रोसँग भएको छ । माल्दिभ्समा उहाँ जानुभयो त्यहाँ चिनियाँ पर्यटकको आकर्षण बढ्यो । यस्तै श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा पनि बढेको छ ।
भारतसँग पनि उहाँहरुबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ । व्यापार व्यवसाय दुईवटै देशको राम्रो भएको छ । पर्यटक पनि जान्छन् । चिनियाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पनि अहिले भारत जाने गरेका छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै पटक चीन जानुभएको छ । मलाई नै चिनियाँहरुले तपाईहरुको देशमा पर्यटक आउन कुनै गाह्रो छैन दश लाख पर्यटक चीनबाट आउने ठूलो कुरा होइन भनेका छन् । तपार्इंहरुले बस्न, खानका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुहोस् भनेका छन् । एउटा त पर्यटनको क्षेत्रमा यसले योगदान गर्दछ भने अर्को चिनियाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि छिमेकीहरुको धारणा के छ भनेर आफू मात्र समृद्ध भएर यो क्षेत्र समृद्ध हुँदैन भन्ने धारणा छ ।
तत्कालका लागि होइन भविष्यसम्मका लागि हामीले सकारात्मक बनाउने, सहयोगी बनाउने र सौहार्द्रताको वातावरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, जी–२० जस्ता संस्थाबाट हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ढङ्ग पु¥यायौँ भने मुलुकमा सहयोग आउने र हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ । यसले गर्दा सन् २०२२ मा विकासशील मुलुक हुने, सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्यका उपलब्धि हासिल गर्ने जस्ता कुरामा हामी सहज रुपमा जान सक्दछौँ ।